ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KALMAEGI(15W) « MMWeather Information BLOG
« ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်လာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KALMAEGI(15W) ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် 15W »
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KALMAEGI(15W)
By mmweather.ygn, on September 14th, 2014
TY Kalmaegi (Luis) is expected to continue moving west-northwest as it accelerates throughout the outlook period. On the forecast track, TY Kalmaegi (Luis) will be moving towards the western part of the Philippine Sea…and will make landfall over Eastern Isabela by late Sunday afternoon or evening…crossing Northern Luzon until early Monday morning…and will move out of the Philippine Area of Responsibility (PAR) on Monday afternoon.
တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် မူလ ခန့်မှန်းသည့်အတိုင်း အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားကာ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ ညပိုင်းတွင် ဟောင်ကောင်-မကာအို အရှေ့ဘက်၊ တရုတ်ပြည်မ တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား Guangdong ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းမှ ဖြတ်ကျော်ကာ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KALMAEGI(15W)သည် ကုန်းတွင်း မုန်တိုင်းအဖြစ် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တရုတ်ပြည်မ၊ Guangdong, Guangxi, ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းအား ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်ပြည်မ Yunan ပြည်နယ်အတွင်း လားရှိုးမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၂၅ဝ ခန့်၊ မိုင်းယောင်းမြို့မြောက်ဘက် ၂၂၅ မိုင်ခန့် (အောက်ဖေါ်ပြပါ တည်နေရာသို့) ကုန်းတွင်းလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အဆင့်ဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်-
8/00Z – 20 knots
TIME TAU 96 – 2014091800Z(စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီ)
POSITION 23.2 N, 100.2 E
WRNG NMBR 014
WIND SPD 20 KTS
MOVEMENT 280 DEG AT 16 KTS
17/00Z – 55 knots
TIME TAU 72 – 2014091700Z(စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီ)
POSIT 22.0 N, 106.9 E
WIND SPD 55 KTS
MOVEMENT 285 DEG AT 15 KTS
GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်နှင့် JTWC, TSR စသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိုးလေဝသဌာနများမှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့် အထက်ပါခန့်မှန်းချက်များအတိုင်း ဆက်လက်ရွေ့လျားရောက်ရှိမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း(ရှမ်းပြည်နယ် တစ်ခုလုံး၊ ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း မြောက်ပိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်း အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နောက်ပိုင်း၌ မိုးရွာသွန်းမှု ပိုမိုလာဘွယ်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းစွန်း တနင်္သာရီတိုင်း တောင်ပိုင်းတွင် မုတ်သုံလေအား အလွန်ကောင်းလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါ၍ ကြိုတင်အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။
ပုံ-၂ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် နောက်ပိုင်း ကုန်တိုင်း မုန်တိုင်းအဆင့်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်အထိ ဆက်လက်ရွေ့လျား ရောက်ရှိမည့် အခြေအနေ
MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, မုန်တိုင်းသတင်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 15W, FIFTEEN, KALMAEGI, ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် « ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်လာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KALMAEGI(15W) ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် 15W »
« ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်လာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KALMAEGI(15W) ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် 15W »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum